Eskilstuna oo qaaday koobka kubada cagta Somaliska Sommarcupen | Somaliska
Af-Soomaali / Ciyaaraha / Nolosha
Magaalada Enköping ayaan maanta waxaa ka dhacay koob xiiso badan oo loogu magacdaray Somaliska Sommarcupen. Kooxda ka socotay magaalada Eskilstuna ayaa si xamaasad leh uga qaaday koobka kooxdii ka socotay Stockholm. Ciyaarta ayaa ku bilaabatay iyadoo la filayay in kooxaha Stockholm iyo Eskilstuna ay midkood qaadi doonto balse kooxda Köping ayaa lafteeda soo bandhigtay ciyaar kulul inkastoo markii dambe ay hoos u dhacday ciyaartooda iyagoo galay kaalinta 4-aad.
Kooxda ka socotay magaalada Fagersta ayaa gashay kaalinta ugu hooseysa iyagoon helin wax dhibco ah. Ciyaarta oo ay ku loolamayeen kooxo ka socday magalooyinka ku dhow Stockholm ayaa waxay ku dhamaatay jawi farxad leh, inkastoo kooxda Stockholm ka socotay ay niyad jab uga tageen koobta iyagoo rajo weyn ka qabay in ay qaadayaan koobka isla markaana goolka raysmada laga dhaliyay ciyaarta oo ay ka dhimantahay 20 sakan oo keliya.
Ciyaartoyda Eskilstuna ayaa waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan iyo xirfad sareysa, iyagoo soo kaxaystay taageerayaal daacad u ah kooxdooda. Waxaan leenahayy Hambalyo Eskilstuna. Dhamaan kooxaha ka soo qeybgalay waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin ka soo qeyb galkiina.
asc dhamaan asaxaabta webkan qimaha leh somaliska.com sxb jimcaale yaamahaan dhan waad iska gaabisay arimaha familada plz nosoo sheeg waxii cusub sida dadka aan caruurta laheyn singl ka ah arintooda mesha aay marayaan somaliska anaga noowarama bis adina waad iska amustay xog fiican nosoo dheeg mesha ay wax marayaan sxb sare jimcaale